July Dream: July72009
Posted by JulyDream at 1:07 AM
ပထမဦးဆုံး လာမန့်တယ်။ အဲဒါ ကျောင်းသားစိတ်ဓါတ်ပဲ ဘယ်တော့မှ အာဏာရှင်ကို ဦးမညွှတ်ဘူး။
ကိုဂျူလိုင်ကြီးရေ .. ကရကဋ်တွေရဲ့ ရာသီကို တခါတခေါက် ပြန်ရောက်လာပြန်ပပေါ့။ ဘေးတိုက်သွား ကန့်လိုက်တိုက်တတ်တယ်ဆိုပေမယ့် လိုရာကို ရောက်အောင်သွားနိုင်တာ ကရကဋ်ဆိုတာ ပြရပေဦးမပေါ့နော်။ ဒီနှစ်အကို့မွေးနေ့မှာ ထူးခြားနေတာကတော့ ဇူလိုင် ၇ ရက်နေ့မှာ လကြတ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ အပြည့်အ၀လကြတ်မှုကို ကနေဒါနိုင်ငံကနေ မြင်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လကြတ်လို့ လက်ကျမသွားဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကြိုးစားကြတာပေါ့။
မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကိုဂျူလိုင်ရေ
လေးစားစရာကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်အကြောင်း ဖော်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။ အဲဒီသူငယ်ချင်းကို ကူညီခဲ့တဲ့ ကိုဇူလိုင်ကိုလည်း လေးစားပါတယ်။
ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့ ဖြစ်စဉ်က စာလေးသင်၊ အေးအေးဆေးဆေး ကျောင်းလေးတက်ဆိုတဲ့ ဘ၀မျိုး မရှိခဲ့ရရှာတဲ့ဘ၀တွေအတွက် ရင်နာမိတယ်။ သူတို့ဟာ တကယ်တော်တဲ့ ကျောင်းသားပီသတဲ့ ကျောင်းသားတွေပါ။ ကိုဂျူလိုင် ရိုးရိုးလေး ရေးပြသွားတာ စိတ်ထဲမှာ စွဲသွားတာပဲ။
ဒါနဲ့ ကိုယ့်မွေးနေ့မှာ မွေးနေ့အကြောင်း မရေးဘဲ ဒီလိုလေး သတိတရရေးတာ ဘယ်လို ခင်မိမှန်း မသိ။ ဒီလူ့ဂွစာလေးကို ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်နော်။
Happy Birthday ပါ ကိုဂျူလိုင်။
Happy Birthdayပါ ။
7 Jul 09, 00:46
kom: Happy birthday! july မွေးနေ့မှ သည် ချမ်းမြေ့ပါစေ။
Happy Birthday! Wish You The Best Wishes!
ဘယ်တော့မှ အာဏာရှင်ကို ဦးမညွှတ်ဘူး။
ကိုမျိုးရန်နောင်သိန်း အကြောင်းကို အရင်က သေချာမသိခဲ့ဘူး...အခုဇူလိုင်ရေးတော့မှ သိလိုက်ရတယ်..အဲဒိအတွက် ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်...
ဒီလိုမျိုး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအကြောင်းကို ဖတ်နေရတဲ့အချိန်ဆို ကျမရင်ထဲမှာ မဖော်ပြနိုင်လောက်အောင် ၀မ်းနည်းကြေကွဲမိတယ်...ပညာတတ်လူငယ်တွေရဲ့  ဘ၀တွေကို တစစီ ဖျက်ဆီးချေမွနေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ အပေါင်းအပါတွေ အားလုံးကို အင်မတန်ကိုမှ ရွံရှာစက်ဆုပ်မိပါတယ်....
မောင်ဇူလိုင်တယောက် လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ ကိုမျိုးရန်နောင်သိန်းနဲ့ အမြန်ဆုံး ( ကောင်းသောတွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ ) တွေ့ဆုံနိုင်ပါစေလို့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်....
မီးမီးအပါအ၀င် လွတ်မြောက်ရေးသူရဲကောင်းများ ကိုယ်ရောစိတ်ပါကျန်းမာပါစေ...
ံHappy Birthday to U, JD!!!!
Happy birthday နှင့် Happy Blog Birth day ပါ ကိုဂျူလိုင်..
အနှစ် ၂၀ ကဒေါင်းပျိုတွေက အိုတော့မယ် မဟုတ်ဘူး ဆံပင်တွေ အရွယ်မတိုင်ခင် ဖြူပြီး အိုနေကြပါပြီ။ မျိုးဆက်သစ်တွေက ဒီထက်ပိုပြီး အားဖြည့်ဖို့ လိုနေပါပြီ။ ကိုဂျူလိုင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ၂၈ နှစ်မြောက် မွေးနေ့နဲ့ ဘလော့ဂ် ၂ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ အခုလို ခွပ်ဒေါင်းတို့ရဲ့ အနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ သတ္တိကို အသိအမှတ်ပြုပြီး အမှတ်တရပို့စ်လေး တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ။
ပျော် ရွင် သော မွေး နေ့ ဖြစ် ပါ စေ ဗျာ
ချစ် ခင် စွာ ဖြင့်
မွေးနေ့ လားဟင်..။ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်... ko julydream ရဲ့ အိမ်မက်တွေ အားလုံး အမှန်တကယ်ရရှိပါစေ..။ အိမ်မက်တွေ ထဲမှာ အားလုံးရဲ့ အိမ်မက်လေး တွေ လဲ ဖြစ်မြောက်လာပါစေ..။
အကို မွေးနေ့ မှာ ဒီလို မော်ကွန်းထိုးနိုင်တာ လေးစားစရာပါ အကို
မွေးနေ့မှသည် နောင်အောင်မြင်ခြင်းများစွာဆီသို့ ရွက်လွှင့်ပျံသန်းနိုင်စေသား။
happy birthday ပါဗျာ။။။။။။။။။
ကိုယ်နဲ့မရင်းနှီးတဲ့ သူရဲကောင်းတယောက်အကြောင်း ဖတ်သွားပါတယ်။
ကိုဂျူလိုင် မွေးနေ့မှာသာမက နေ့ရက်တိုင်းပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေရှင်...
မသိသေးသူအကြောင်းပါလားဗျ။ လေးစားထိုက်တဲ့ သူတွေပါဗျာ။
သူ့ မျက်စိအတွက် စိတ်ပူမိနေတယ်..ဦးညွတ်ပါတယ် ကိုဂျူလိုင်ရဲ့စာတွေကို အရူးလင်လုပ်တယ် မထင်ပါဘူး ကောင်းပါတယ်..
မလွတ်လပ်နေသူတွေလည်း အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ခွင့် ကြုံပါစေ ..
Happy Birthday နော်...
မွေးနေ့ပိုစ့်လေးက ထူးထူးခြားခြား အမှတ်တရရှိလိုက်တာ...
သူများတွေအလျိုအလျို သူရဲကောင်းတွေအကြောင်းရေးနေကြတာ အားကျလိုက်တာ။ ကိုယ်သိတဲ့လူဆိုလို့ တယောက်မှမပါလို့ အားငယ်လိုက်တာ။ ဘာပဲပြောပြော happy birthday နော်။
Happy birthday Ko July!
ဟက်ပီးဘက်ဒေးပါဗျာ။ ထောင်ကျဆိုပြီး သိမ်ငယ်မနေဘူးဆိုတာ နဲနဲ မရှင်းဘူးဗျ။ ရာဇ၀တ်မှုထောင်ကျမှမဟုတ်တာဗျာ။ သိမ်ငယ်စရာမရှိပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့အကြောင်းတပိုင်းတစသိရတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။
အချိန်မှီသေးတယ်ဟုတ် happy birthday ပါ
happy birthday လို့ အခုမှ ပြောရင် နောက်မကျသေးဘူး မဟုတ်လား...
လေးစား ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ လူတယောက်အကြောင်း
နောက်ကျစွာ စာလာဖတ်ပီး ဟက်ပီးဘတ်ဒေးသွားပါတယ်
Happy Birthday ပါ အကို အခုလိုမျှဝေပေးတာကိုလည်း ကျေးဇူးပါ ..... ကျောင်းသားဆိုတာ ယုံကြည်ချက်ပေါ်မှာ အသက်ရှင်နေတာပါ ... သူ့စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားမိပါ၏
လေးစားပါ၏... Happy Birthday ပါ အစ်ကိုရေ နောက်ကျပေမယ့်ဆုတောင်းပေးပါတယ်
Fourth Year မှာ မောင်ရန်နောင် က ဘာသာစုံ အောင်တယ်ကွ။ Fifth Year မှာ ဆရာတွေနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်လို့ စာမကျက်ပဲ အကျခံတယ်။ Re-exam မှာ ငါကူပေးလို့ ပြန်အောင်တယ်။ Final လည်း ဒီအတိုင်းပဲ ငါ ပဲသူ့ Thesis ကို ကူပေးလိုက်တာ။
မောင်ရန်နောင်က English, French, Spanish, Italian, Russia, Japanese, Thai နဲ့ Shan စကားလည်း တတ်သေးတယ်
နောက်ဆုံးအကြိမ် ထောင်ထဲ မ၀င်ရသေးခင်မှာ Fulbright scholarship ရထားပြီး US မှာ ကျောင်းသွားတတ်ဖို့ စောင့်နေတာ။ သူက Scholarship ရရချင်း ထွက်မသွားဖြစ်တာက ကြုံတဲ့ University မှာ မတက်ချင်ပဲ သူလိုချင်တဲ့ Herbert University အတွက်ထပ်ပြီး ၀င်ခွင့် အတွက် ပြင်ဆင်နေလို့လေ။ အဲဒီ အချိန်မှာ အရေးအခင်းဖြစ်တာ။ အဲဒီမှာ သူကလမ်းဆင်းလျောက်တယ် အပျော်ပါတဲ့။ လမ်းဆင်းလျောက်လို့ အဖမ်းခံရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူက အဇမ်းခံရတဲ့ သူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် UN ကိုစာရေးလို့ပါ။